अब कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने ?::Digital News Paper
अब कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने ?
स्पष्ट नीति, नेता, नेतृत्वसहितको राष्ट्रिय हितमा काम गर्नसक्ने, दूरगामी शक्ति निर्माण नै आजको आवश्यकता हो ।
विचार र सिद्धान्तको स्पष्टता
राजनीतिक दल भनेको विचार, सिद्धान्त र आन्दोलनको समष्टिगत रूप हो । जनताका जीवन अप्ठ्यारा, जनजीविका, अधिकार, मानवता र सभ्य समाज निर्माणका निम्ति निरन्तरताको क्रियाशीलता नै आन्दोलन हो । शक्तिमा रहँदा या बाहिर हुँदा जनताका जीवन पद्धतिप्रति सदैव सचेत रहनु, संघर्षशील रहनु नै पार्टी निर्माण गर्नु हो । यस्तो पार्टी मात्रै दीर्घकालीन एवं जनताको पार्टी बन्न सक्छ ।
परिवर्तनको चाहनालाई जबर्जस्त स्थापना गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्र वर्तमानको पनि अग्रगामी राजनीतिक शक्तिकेन्द्र हो । समाज दुई किसिमबाट परिवर्तनशील हुन्छ । एक, क्रान्तिमार्फत । समाजमा रहेका गैरमानवतावादी सामन्ती व्यवस्थाविरुद्ध जब क्रान्ति हुन्छ, तब परिवर्तन छिटो हुन्छ । रुढिवाद, जमिनदारी, शोषण, दमन, विभेद, छुवाछुत, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय लंैगिक उत्पीडनविरुद्ध क्रान्तिकारी परिवर्तनशील शक्तिले निरन्तर संघर्ष गरिरहन्छ । पुरातन सामन्ती राज्यसत्ता, सोच, कुल, शासन, संस्कारविरुद्ध कठोरतापूर्वक संघर्ष गर्नु इतिहासको बाध्यता हो ।
दोस्रो, नयाँ पुस्ताको पुस्तान्तरणसँगै समाज आफैँ परिवर्तनशील बन्न पुग्छ । पुराना पुस्ताका विकृति, कुसंस्कार, नयाँ पुस्तामा आइपुग्दासम्म अलि अग्रगामी चेतनाको विकास हुन्छ । तर, यस्तो खालको नियमित परिवर्तन निकै ढिलो गतिमा हुने गर्छ । सामान्य परिवर्तनका निम्तिसमेत पनि सयौँ वर्ष पर्खनुपर्ने हुुन सक्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीति नै अबको बाटो हो । प्रश्न उठ्छ, स्थानीय तहको दुई चरणको मत परिणामअनुसार त सबैभन्दा प्रगतिशील, गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षता, समानता र समावेशीताको पक्षधर माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिको रूपमा मात्रै किन खुम्चिन पुग्यो ? सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यवहारको हिसाबले त माओवादी केन्द्रका यी एजेन्डा निकै महत्वपूर्ण छन् । यहीँबाट समीक्षा गरेर मात्रै पुनः यस पार्टीलाई सबैभन्दा अब्बल, विशाल र राष्ट्रकै मूल धार बनाउन सकिन्छ । त्यसका निम्ति विगतका कमी, कमजोरी, फुट, नेतृत्वमा देखिएका बिलासिता, जनतामा परेका वा पारिएका भ्रम चिर्न सक्षम नेतृत्वको विकास, निरन्तर जनतासँगको सहकार्य इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यक्रममा ध्यान दिन जरुरी छ ।
कमजोर वर्गको प्रतिनिधि
जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, समुदाय कमजोर वर्ग र अधिकारबाट वञ्चित वर्गको नेतृत्व गर्ने, दल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । व्यापारी धनाढ्य, सामन्ती, दलाल, पुँजीपतिको सेवा गर्न त कांग्रेसलगायत अन्य दल छँदै छन् नि !
जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत भाषा, क्षेत्र, लिंगका भिन्न प्रकारका समस्या छन् । मेरो राष्ट्र, मेरो संविधान, मेरो गौरव भन्न पाउने र सक्ने अधिकार सबै वर्ग समुदायलाई जरुरी छ । जातीय विभेद छुवाछुतजन्य व्यवहारबाट उत्पीडनमा पारिएका दलित वर्ग समुदायका मानिसको आत्मसम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय र अधिकार स्थापित गर्ने राजनीतिक शक्ति जरुरी छ । त्यस्तै महिला, मजदुर, किसान, भूमिहीन, तेस्रोलिंगी, अपांग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, कर्णाली क्षेत्रलगायत उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको हक–अधिकार स्थापित गर्ने अठोट बिर्सन मिल्दैन । अधिकारबाट वञ्चित वर्ग समुदायको रगत, पसिना र बलिदानद्वारा स्थापित उपलब्धि र जनाधारलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानता, समानुपातिक समावेशीकरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई संविधानमा लेख्ने कार्य त सम्भव भयो । तथापि ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चुनौती छन् । जनतालाई सक्षम, सचेत, सम्पन्न, शिक्षित बनाउनुभन्दा भ्रममा राखेर साम, दाम प्रयोग गरी चुनाव जित्ने र भोट बैंकका रूपमा मात्रै सर्वसाधारणलाई उपयोग गर्ने खेल फेरि सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय नीति र नेतृत्व
सम्पूर्ण परिवर्तन, जनउपलब्धि र जनाधिकारलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्नका निम्ति निरन्तर आन्दोलन र संघर्ष भएका छन् । अहिले पनि कार्यान्वयनका निम्ति अग्रगामी र प्रतिगामी शक्तिबीचको संघर्ष जारी छ । यथास्थितिवादी पुरातन शक्तिले यस प्रकारको जनाधिकारलाई स्विकार्न सकेको छैन भने परिवर्तनकारी शक्ति यस उपलब्धिको उपयोग गर्दै थप जनतालाई सबल बनाउन चाहन्छ ।
एकल जातीय, भाषा, धर्म, क्षेत्रीय, वर्गीय र समुदायलाई मात्रै राष्ट्रवादी, ठान्ने र अन्य कमजोर जाति, वर्ग, समुदायलाई गालीगलौज गर्ने, हेप्ने, घृणा गर्ने नक्कली राष्ट्रवाद मौलाएको छ ।
नीति र नेतृत्वको प्रगतिशील सोच, व्यवहार स्पष्ट र दूरगामी हुनैपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका निम्ति व्यक्तिगत र पार्टी स्वार्थ त्याग्न सक्ने सामूहिक नेतृत्व विकास गर्नसके मात्रै देशको समृद्धि सम्भव छ । स्पष्ट नीति, नेता, नेतृत्वसहितको राष्ट्रिय हितमा काम गर्नसक्ने, दूरगामी शक्ति निर्माण नै आजको आवश्यकता हो । त्यसपछि मात्रै सबै जाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको विकास सम्भव छ । के यस्तो सक्षम राजनीतिक शक्तिका रूपमा माओवादी केन्द्रलाई आगामी दिनमा विकसित गर्न सम्भव होला ?
के हो लाखे नाच ? कस्ले सुरु गरे, लाखे नाच हेर्न पर्यटक उत्साहित
आखिर किन मोह भंग हुँदै छ ? स्वामी आनंद अरुण र यिनि बाट संचालित ओशो आश्रमको !
आधुनिकता,अधिकार : नारी सैन्दर्य
मणिरत्नको भत्केको घर…
ल्होसार र गुरुङ समुदाय चिन्तन – सुरज गुरुङ
संसार हल्लाउने ‘त्यो’ क्रान्ति !